नर्स एथलेटिक्स मिट सम्पन्न « KhelkudNews.com
नर्स एथलेटिक्स मिट सम्पन्न
Published On : 10 February, 2020 6:03 am
ब्लु क्रस अस्पताल र डा. खगेन्द्र स्पोर्ट्स फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा तेस्रो नर्सेस एथलेटिक्स मिट—२०७६ सम्पन्न भएको छ । शनिवार हलचोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको हातामा ‘रन फर कमिटमेन्ट, रनर्स आर वीनर’ भन्ने नाराका साथ भएको सो मिटमा ३४ अस्पतालका ४२८ जना नर्स सहभागी थिए । नर्सेस मिट अन्तरगत भएको १ सय मिटर दौडमा नेपाल मेडिकल कलेज हस्पिटलकी शर्मिला पौडेल प्रथम, सशस्त्र प्रहरी अस्पतालकी पूजा यादव द्वितीय तथा ग्रीनसिटी अस्पतालकी पूजा राई तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल रहे ।
२ सय मिटर दौडमा ग्रिन सिटी हस्पिटलकी पूजा राई प्रथम, सशस्त्र प्रहरी अस्पतालकी पूजा यादव द्वितीय र उपेन्द्र देवकोटा हस्पिटलकी मुना श्रेष्ठ तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल रहे । त्यस्तै, रोड रेसमा नेपाल प्रहरी हस्पिटलका खुसी हिराचन प्रथम, सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका राजेश्वरी बदु द्वितीय र सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका रोजी गजमेर तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भए । त्यसै गरी ४ सय मिटर रिले दौडमा नेपाल मेडिकल कलेजका खेलाडीहरू प्रथम, ग्राण्डी हस्पिटलका खेलाडीहरू द्वितीय र नेपाल प्रहरी हस्पिटलका खेलाडीहरूतृतीय स्थान हासिल गर्न सफल रहे ।
कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत सुनार र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको पनि उपस्थिति थियो । बिरामीहरूको २४ सैं घण्टा सेवामा लागि परिरहने नर्सहरूको कामको कदर गर्दै खेलमा लागे स्वस्थ समेत हुने भएकाले विगत तीन वर्षदेखि र्नि टिमको आयोजना गरिएको फाउन्डेसन तथा तेस्रो नर्सेस एथलेटिक्स मिट आयोजक समितिका अध्यक्ष डा. खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस्ता कार्यक्रममा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने ब्लूक्रस अस्पतालका मेडिकल प्रमुख डा. प्रज्वलनमान श्रेष्ठले बताए । उनले ब्लु क्रस अस्पतालको खेलकुदका अन्य पाटामा पनि चासो रहेको जानकारी दिए ।